Home Wararka Madaxweynaha Somaliland oo u dhoofay dalka Itoobiya
Madaxweynaha Somaliland oo u dhoofay dalka Itoobiya
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa saaka u dhoofay waddanka Ethiopia.
Madaxweyne Biixi ayaa sida la xaqiijiyay marti-qaad rasmiya ka helay Ra’iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed.
Labada mas’uul ayaa lagu wadaa in ay Addis Ababa ku yeeshaan wada-hadallo ku saabsan xoojinta xiriirka iskaashi ee Somaliland iyo Ethiopia.
Dhinaca kale Madaxtooyada Somaliland weli kama hadlin safarka Madaxweyne Muuse Biixi uu ugu dhoofay dalka Ethiopia.
Previous articleCabdi Xaashi & Wiilkiisa oo lagu eedeeyay in ay Fahad u boobayaan kuraas
Next articleGuddoomiyaha Cusub ee Gobolka Bari oo Isimada kala hadlay arrinta Boosaaso
[Xog] Wakiilka Ergeyga Midowga Afrika [John Mahama] oo hore loogu...
MW Deni “Puntland waxay hogaanka u qaban doontaa kacdoonka dowladnimada ee...